August 17, 2020 / Last updated : August 17, 2020 Fampianarana
Ilay Sorona Faratampony nataon’i Jesoa Kristy
I Kor.1:18 Fa ny teny ny amin’ny hazo fijaliana dia fahadalana amin’izay ho very, fa herin’Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena…22 fa ny Jiosy mila famantarana, ary ny jentilisa mitady fahendrena, 23 fa izahay kosa mitory an’i Kristy voahombo tamin’ny hazo fijaliana, dia fahatafintohinana amin’ny Jiosy ary fahadalana amin’ny jentilisa, 24 fa amin’izay voantso kosa, na […]
June 1, 2020 / Last updated : June 1, 2020 Filazantsara
Ny Fanahy Masina mahatonga antsika hahery
Asa 4:31 Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin’Andriamanitra tamin’ny fahasahiana.
May 21, 2020 / Last updated : May 21, 2020 Filazantsara
Efa niakatra any andanitra Izy
Marka 16:19 Ary Jesosy Tompo, rehefa niteny taminy, dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo an-kavanan’Andriamanitra. 20 Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitori-teny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin’ny famantarana izay nomba azy. Amena
May 10, 2020 / Last updated : May 10, 2020 Filazantsara
Manantena an’Andriamanitro aho
Habak. 3 :17 Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, Ary tsy misy voany ny voaloboka, Na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, Ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, Na dia vonoina aza ny ondry ao amin’ny vala, Ary tsy misy omby ao am-pahitra, 18 Nefa izaho dia mbola hifaly amin’i Jehovah ihany Sy hiravoravo […]
February 22, 2020 / Last updated : February 22, 2020 Fanasitranana
Sitrana teo no ho eo ny mason’ilay tovovavy
Fijoroana vavolombelona iray : Tonga teto aminay ity tovovay iray 18 taona ny 21 febroary 2020 teo. Haingo ny anarany. Nilaza izy fa marary ny masony, manindrona azy izy io ary marary azy foana. Nambarany fa voan’ny lay izy io tany ambanivohitra ary nentina teny @ mpanao ody lay fa tsy naitam-bokany. Rehefa nambara azy […]
February 16, 2020 / Last updated : February 16, 2020 Filazantsara
Mitoera ao @ Jesoa Kristy
Jaona 15:7 Raha miray amiko ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany.
February 11, 2020 / Last updated : February 11, 2020 Hira
Ianao Jesoa no fifaliako. Ianao Jesoa no heriko. Ianao Jesoa fanantenako. Ianao Jesoa Fiainako
February 11, 2020 / Last updated : February 11, 2020 Filazantsara
Lioka 22 : 46 Dia hoy Izy taminy: Nahoana no dia matory ianareo? Mitsangàna, ka mivavaha, mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy.
August 14, 2017 / Last updated : August 14, 2017 Fanasitranana
Sitrana teo no ho eo ny aretina nahazo ilay vehivavy !
Raha nihazo ny faritr’Alaotra iny izahay dia nisy vehivavy iray izay efa narary amam-bolana. Marary mafy azy ny tendany sy foto-tsofiny. Tsy afaka miodina firy ny tenda noho ny aretina ary tsy dia afaka misokatra tsara ihany koa ny vava araky ny filazany fa marary azy. Efa notsaboina teny @ dokotera ary efa nentina teny […]
July 11, 2017 / Last updated : July 11, 2017 Filazantsara
Miadia ny ady tsaran’ny finoana, hazòny ny fiainana mandrakizay
1 Timoty 6:10 Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin’ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin’ny alahelo be. 11 Fa ianao kosa, sy lehilahin’Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany, ka miezaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an’Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. 12 Miadia ny ady tsaran’ny finoana, […]
NANTENAIANA sitraka on Ny nitsofana ny trompetra tany an-danitra sy ny fiverenan’i Jesoa Kristy
Laura on Ny nitsofana ny trompetra tany an-danitra sy ny fiverenan’i Jesoa Kristy
RAMAVOHARINIRINA FELANIAINA LYDIA on Ny nitsofana ny trompetra tany an-danitra sy ny fiverenan’i Jesoa Kristy
RAVALOHERY Armand on Ireo asa fanasitranana maro ny 10/09/15 ka hatr@ 10/10/15